မန်ယူကစားသမားဟောင်း ရွန်နီဂျန်ဆင်နဲ့ နည်းပြတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘောလုံးသင်တန်းလာပေးမယ် – Sport – Local Sports – Duwun
မန်ယူကစားသမားဟောင်း ရွန်နီဂျန်ဆင်နဲ့ နည်းပြတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘောလုံးသင်တန်းလာပေးမယ်
ဂျပန်အခြေစိုက် Manda ကုမ္ပဏီရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ လာရောက်မှာပါ။
WL 2017-05-08 05:23:22.0, 2017-05-08 05:23:22.0
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဂန္ထဝင်ကစားသမား၊ နောက်ခံလူ ရွန်နီဂျွန်ဆင်နဲ့ နည်းပြနှစ်ဦးက မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ကာရက်တိုဘောလုံးသင်တန်းတွေ ပို့ချသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
မန်ယူအသင်းနဲ့ စပွန်ဆာစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ Manda ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းပြီး Manchester United Soccer School Program အဖြစ် ရွန်နီဂျွန်ဆင်နဲ့ နည်းပြနှစ်ဦးက ရန်ကုန်မြို့နဲ့ ပုသိမ်မြို့တို့မှာ မေလ ၁၁ ကနေ ၁၅ ရက်အထိ ငါးရက်ကြာ မြန်မာလူငယ်တွေအတွက် ဘောလုံးသင်တန်း ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်အခြေစိုက် Manda ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံမှာ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းတွေရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ တရားဝင် Nutritional Supplement Partner ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်တွေကိုတော့ လာမယ့် မေလ ၁၁ ရက်မှာပြုလုပ်မယ့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘‘အသေးစိတ်ကတော့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပြ သွားပါမယ်။ ရန်ကုန်မှာ ဘောလုံးသင်တန်းလေးလုပ်မယ်။ ပြီးရင် ဧရာဝတီတိုင်းကိုသွားပြီး ဘောလုံးသင်တန်းနဲ့ ဘောလုံးအ ထောက်အကူပစ္စည်းတွေလှူတာ တွေလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်’’လို့ Manda ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။
အသက် (၄၇)နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီး ဖြစ်တဲ့ နော်ဝေးနိုင်ငံသားရွန်နီဂျွန်ဆင်က မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာ ၁၉၉၆ ခုနစ်ကနေ ၂၀၀၂ အထိ ပွဲပေါင်း ၉၉ ပွဲ ကစားခဲ့ကာ ခုနစ်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား လေးကြိမ်နဲ့ အခြားဆုဖလားတွေကိုလည်း ရယူနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
Photos : Man U Fan
နီပေါကို ၁၁ ဂိုးသွင်းပြီး ခြေစစ်ပွဲအောင်ဖို့ အခြေအနေကောင်း
ဟံသာဝတီကိုရှုံးလို့ ချန်ပီယံလမ်းကြောင်းမှာ ဖိအားဝင်သွားတဲ့ ရန်ကုန်
မြန်မာ - ကမ္ဘောဒီးယားပွဲစဉ်ကို မန္တလေးမှာ ကျင်းပသွားမယ်လို့ MFF အတည်ပြု
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်မှာ အအောင်မြင်ဆုံးအသင်းဖြစ်လာတဲ့ ရန်ကုန်
မကွေးကိုနိုင်ပြီး ဗိုလ်လုပွဲအတွက် ရန်ကုန်ခြေလှမ်းပြင်
၄၅ မိနစ်ပဲ ကစားမယ့် ရန်ကုန် - ဟံသာဝတီပွဲ
ရန်ကုန်အသင်းရဲ့ ပစ်မှတ်က အာရှချန်ပီယံလိဂ်လား? AFC CUP လား?
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ရဲ့ (၁၀)နှစ်တာ ခရီးကြမ်း
အာဆီယံဖူဆယ်ချန်ပီယံရှစ်မှာ အိမ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ တစ်အုပ်စုတည်းကျရောက်နေ
ဒေါ်လာ ခုနှစ်သိန်းခွဲတန် စပွန်ဆာစာချုပ်,ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့ MFF
အမျိုးသမီး ဂိုးပြတ်နိုင်ပြီး အမျိုးသား ရှုံးနိမ့်
ဟွန်ဒါ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ ဖနွမ်းပင်က မျှော်လင့်ချက်အသစ်များ
အိုလံပစ် ခရီးကြမ်းအတွက်ပထမဆုံး အတားအဆီးများထွက်ပေါ်လာပြီ
တီဗီထဲမှာပဲ မြင်ဖူးတဲ့ မန်ယူနဲ့အာဆင်နယ် ကစားသမားတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို လာမယ်ဆိုတာ သိပြီးပြီလား?